कहाँ कति मत खस्यो ? जम्मा ६५ प्रतिशत मतदान - Everest Dainik - News from Nepal
कहाँ कति मत खस्यो ? जम्मा ६५ प्रतिशत मतदान
काठमाडौं, मंसिर ११ । संघ तथा प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि आइतबार सम्पन्न पहिलो चरण चुनावमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ । यो स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा केही कम प्रतिशत हो । निर्वाचन आयोगले सबै स्थानको विवरण संकलनपछि केही प्रतिशत बढ्न सक्ने जनाएको छ ।
आइतबार ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा सदस्य र ७४ प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि पहिलो चरणमा मतदान भएको हो । बिहान ७ बजेबाट मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिए पनि चिसो मौसमका कारण हिमाली क्षेत्रमा केही ढिलो गरी मात्र मतदान कार्य प्रारम्भ भएको थियो । थोरै मात्र मतदाता रहेका केन्द्रमा पनि कर्मचारीले आयोगले तोकेको साँझ ५ बजेसम्म मतदाता कुरेर बसेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस पुन मतदान गर्न माग गर्दै आयोगमा मुद्धा
उनले भने, ‘स्थानीय तहमा टोल छिमेकका नेता छान्न ७० प्रतिशतभन्दा माथि मत खसेको थियो । यो राष्ट्रिय चुनाव भएकाले पनि मत कम खसेको हो ।’
आइतबार साँझ आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘छिटफुट घटनाबाहेक उत्साहजनक रूपमा मतदान भएको छ । आयोग अब दोस्रो चरणको मतदान गराउने प्रक्रियामा छ ।’हिमाली जिल्लामा जाडो सुरु, मतदाता सहर पस्नु तथा पश्चिमी जिल्लाका मतदाता विदेशिएका कारण मत प्रतिशत घटेको आयोगको जनाएको छ ।संघीयता कार्यान्वयनका लागि जनताले उत्साहजनक रूपमा मतदानमा सहभागी भएको पूर्व्निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सोलुखुम्बुको तिङलाका बासिन्दाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी नै यस निर्वाचनलाई पनि बहिष्कार गरेका छन् । क्षेत्र निर्धारण गर्दा स्थानीय जनतालाई अपायक परेको जनाइएको छ ।टेलिफोन र सञ्चारका अन्य उपकरणको पहुँच नुहँदा छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको घेराङ मतदान केन्द्र र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको कलाङ मतदान केन्द्र सम्पर्क्विहीन भएका हुन् ।
दुई चरणमा निर्वाचन भएको २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा पनि मतपेटिकलाई यसरी नै सुरक्षित तवरले राखिएको आयोग प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मतपेटिका साटेर धाँधली भएको आरोप लगाउँदै एमाओवादी मतगणनास्थलबाट बाहिरिएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।